SWMC 360-DTH Riigga Qodista ee Goobaha dhiska ee SHANDONG PROVICE, Shiinaha
by admin 21-04-01
Qalabka qodista Xuanhua wuxuu sameeyay guul kale oo cajiib ah - 50 unug SWMC 360 qodista RIGS waxay isticmaaleen in ka badan 1,800 tan oo walxaha qarxa in ka yar hal bil gudaheed, in ka badan laba jeer isticmaalka shaqada maalinlaha ah. Tianchen Qixiang Nylon Mashruuc Qalab Cusub, oo ah mashruuc muhiim ah oo ka tirsan Gobolka Shandong oo wadar ahaan...
Qodista SWMC T45-TH WUXUU KA SHAQEEYAA QAABKA LIMESTONE EE BEDELKA DEGMADA BEIJING
Miinada Fengshan, oo ku taal degmada Changping, Beijing, waa saldhigga sahayda alaabta ceeriin ee Beijing Cement Works Co., Ltd., kaas oo lagu qiimeeyay "Cutubka Tijaabada Miinada Cagaaran ee Qaranka" ee Wasaaradda Dhulka iyo Khayraadka ee 2011 iyo mid shirkadihii ugu horeeyay ee sibidhka ka gudbiya
Qalabka qodista dhulka hoostiisa ee SWMC 370-DTH ayaa si weyn loogu isticmaalaa goobaha dhismaha
by admin 20-11-05
SWMC 370 riig qodista dhulka hoostiisa ayaa si guul leh u dhamaystiray mashruuca gundhigga u ah mashruuca hantida ma-guurtada ah ee Guangzhou, Shiinaha. Mashruuca hantida maguurtada ah ee Guangzhou wuxuu daboolayaa dhul dhan 62,000 m2, kaas oo 44,000 m2 ka mid ah ay dhulka ka sarreeyaan, 18,000 m2 ay tahay dhulka hoostiisa. Waxaa jira 25 dabaq oo dhulka ka sarreeya...
Tusaalaha codsiga ee riigga qodista ee SWMC ee injineernimada sawirkavoltaic
by admin 20-11-02
Iyada oo yaraanta sii kordheysa ee tamarta dhaqameed, horumarinta iyo ka faa'iidaysiga tamarta cusub ayaa soo jiidatay dareenka dhammaan waddamada adduunka. Isla mar ahaantaana, tamarta cusub ee sawir-qaadista ee Shiinaha ayaa si degdeg ah u kobcaysa, tignoolajiyaduna si tartiib tartiib ah ayey u qaan-gaaraysaa, soo dhowaanaysaa ama falcelinaysaa. ..
Shixnadaha ayaa si habsami leh loogu sameeyay cagaf-cagafyada hoos yimaada Mashruuca Batroolka Qaranka ee Ruushka
by admin 20-09-04
Sebtembar-Xilliga deyrta ayaa soo socda, xilli goyn leh midho qani ah iyo faafin caraf! Cagaf-cagaf-dhisidda shaqada adag ee shaqaalaha HBXG ee Mashruuca Batroolka Ruushka ee ay ku guulaysatay HBXG ayaa si guul leh loogu soo raray suuqa CIS mar kale! Kani waa qandaraaska labaad ee iibsiga ee...
SWMC, soo saaraha Mashiinka qodista, si la mid ah bixinta mashiinada dhamaystiran macaamiisha, ka dhigaysa isticmaalka in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo warshadaha si ay u bixiyaan xal qodida la isku halayn karo ee isticmaalayaasha mashiinada qodista dhulka hoostiisa iyo caawinta adeega macaamiisha ...
Cagaf-cagaf sare-sare ayaa doorbiday!
Mar.12th,2020, dufcaddii SD7N cagaf-cagaf-cagafeedka sare ayaa loo raray dekedda oo u diyaarsan rarida suuqa gobollada Ruushka&CIS. Cagaf-cagafyadan dufcaddii ah waxaa soo iibiya macmiilka macdanta, si uu u qabto shaqada xariijimaha iyo ururinta alaabta daboolka ah. Waxay iibsadaan...
La-dagaalanka Cudurrada faafa, gaarsiinta waqtiga!
Isagoo ka hortagaya faafitaanka cudurka faafa ee coronavirus-ka noval, shaqaalaha SWMC waxay qaadayaan dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo xaqiijiyo "kiis caabuqa eber" , waxayna isku dayayaan inay si buuxda u dhaqan galiyaan shixnadda waqtiga saxda ah. Mar.5th,2020, qayb ka mid ah cagaf-cagaf TS160-3HW ayaa loo raray Koonfur-bari...